Maqaallada Prasanna Chitanand Martech Zone |
Maqaallada by Prasanna Chitanand
Soo ifbaxa falanqaynta saadaalinta ee suuq-geynta iimaylka ayaa noqotay mid caan ah, gaar ahaan warshadaha ecommerce. Isticmaalka tignoolajiyada suuq-geynta ee saadaalinta leh waxay awood u leedahay inay horumariso beegsiga, waqtiga, iyo ugu dambaynta beddelka ganacsi dheeraad ah iimaylka. Farsamadan ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa aqoonsiga badeecadaha ay suurtogal tahay inay macaamiishaadu iibsadaan, marka ay u badan tahay inay wax iibsadaan, iyo macluumaadka shakhsi ahaaneed ee dhaqaajin doona hawsha. Waa maxay Suuqgeynta Saadaasha? Suuqgeynta saadaalintu waa xeelad